ELouisiana ukhangela sandise urhwebo China wayo - China Yangzhong Luck Star ukutywina
PTFE Camera irabha ezitywine
Itanki Container abaza kuzisebenzisa
ELouisiana ukhangela sandise urhwebo lwabo China
Ukutyhala ubuchwepheshe kwimveliso iikhemikhali oyile, kunye nokujonga phambili ngenqwelomoya aerospace
Louisiana ufuna parlay amandla ayo oli negesi yendalo kunye nemveliso lwemichiza ibe eyandisiweyo ubuhlobo zorhwebo kunye neTshayina, njengoko igosa kuphuhliso lwezoqoqosho top karhulumente.
Don Pierson wamiselwa unobhala loPhuhliso loQoqosho Louisiana xa uYohane Bel Edwards waba irhuluneli ngoJanuwari. Pierson uthe urhulumente uceba ukwakha kumashishini zayo zemveli - eneji kunye nemveliso imichiza, amahlathi kunye mveliso.
"Nathi unethemba sokwamkela amathuba kwixesha elizayo lweenqwelo kunye aerospace, IT kunye nolawulo lwamanzi," wathi kudliwano-ndlebe e New York on Tuesday.
Urhwebo phakathi Louisiana kunye China iye akhulayo. Ukususela ngo-2008, Louisiana iye uhamba phambili kwi US kwi nganye capita utyalo-mali ngqo kwamanye amazwe, kunye neenkampani Chinese abadlale indima enkulu.
China ke mali yesibini ngobukhulu eLouisiana.
China imele market top ngaphandle Louisiana, kunye ezingaphezu kwe $ 8.6 billion kwamanye amazwe ngo-2014, zodidi eLouisiana No. 4 phakathi US ithi ethunyelwa nezwe.
Pierson uthe kukho iindawo ezimbini ezibonakala ibe ngokukodwa elithembisayo kwandiswe urhwebo phakathi kukarhulumente kunye neTshayina. Omnye ukuvelisa feedstock imichiza ezifana methanol, nto leyo efunekayo ukuvelisa imveliso yemichiza.
Enye kubandakanya ukwenziwa irhasi engamanzi yendalo, okanye LNG, eyenziwe xa igesi yendalo lupholisiwe ku thabatha degrees 259 Fahrenheit.
Ngo-2014, Louisiana yafumana utyalo-mali ka $ 1,85 billion evela Shandong Yuhuang Chemical Co ukuphuhlisa isityalo methanol eLouisiana i-St James Parish. Eli ziko, nto leyo ilindeleke ukuba idale imisebenzi 400 esisigxina kunye nemisebenzi malunga 2,000 zokwakha zethutyana, xa isakhiwa.
"Siqikelela ukuba kuya kuza kumgca kwaye uqale imveliso ngo-2017," wongeze watsho.
Nangona amaxabiso oli negesi yendalo ephantsi unqandwe imveliso yezamandla karhulumente, amanani kuba eqhutywa ishishini imichiza.
"Ukuhla kwamaxabiso oyile ibetheke kwezinye iindawo Louisiana nzima, njengoko umvelisi inani ezimbini oyile negesi yendalo kwi-US nathi," utshilo Pierson.
"Kodwa ke amaxabiso aphantsi kwakhona ukudala amathuba, ekubeni oyile negesi le feedstock ukuze imveliso iikhemikhali yaye kusetyenziswa amandla kwisibonelelo silwenza na feedstock."
Uqoqosho eTshayina olukhulayo iza kufuna feedstock ukuba imveliso yemichiza, kunye nendawo Louisiana nesexesha kwi Gulf of Mexico iza kwenza kube lula ukuba mveliso Chinese ukuseka imveliso lithi kwaye hleba imveliso umva ukuya eTshayina nge kwinethiwekhi Mcetywa karhulumente okanye enye amachweba, wathi Pierson.
Inkqubo port Louisiana kaThixo uphakathi enkulu ehlabathini, 27 ngokudla kunye nzulu-uyilo namachweba.
ixesha Post: Jun-26-2018
Iimpahla kunye neenkonzo zorhwebo phakathi China i ...
Ukutyhala ubuchwepheshe ioli, chemical ukudla ...
Itanki container fleet jikelele iquka ...